Maxaa la gudboon qolkaaga jiifka si uu u noqdo qolka ciyaarta? | Forum Mobile
Jose Albert | 10/05/2022 22:25 | La cusbooneysiiyay 13/05/2022 22:31 | Ciyaaraha
Maxaa la gudboon qolkaaga jiifka inuu noqdo qol gamer ah
Aynu noqonno carruurta, dhalinyarada ama dadka waaweyn, ragga ama dumarka, qaar badan oo naga mid ah ayaa aad u jecel videogames. Waxaana suurtogal ah, inta badan xaaladaha, waxaanu ku raaxaysanay dareenkaas Vintage ama console-ka casriga ah ama ciyaaraha fiidiyowga kumbuyuutarka, laga soo bilaabo qolka ama qayb ka mid ah isticmaalka guud ee guryahayaga. Si kastaba ha ahaatee, hubaal ilaa xad ama ka weyn, dhammaanteen waxaan rabnaa inaan samayno qolkayaga jiifka ama meel kale oo gaar ah, a "qolka cayaarta" habboon.
Sababta, maanta waxaan wax ka qaban doonaa waxa ay tahay inaan helno oo aan ku daro "Qolka Ciyaartoyga" ku habboon si aad si guul leh oo fudud u gaadho naqshadeynta iyo dhismaha. Haddaba waa kuwan qaar fikrado wanaagsan, waano iyo dardaaran si loo gaaro yoolkaas.
Iyo sida caadiga ah, ka hor intaanan u gelin daabacaadan hadda taagan qodob aad u la xidhiidha xiiseeya ciyaaraha fiidyaha (ciyaaraha), si gaar ah oo ku saabsan waxa ay noqon doonaan «qolka gamer" ku haboon, waxaan u dhaafi doonaa kuwa xiiseynaya isku xirka qaar ka mid ah our qoraallo hore oo la xiriira oo la mid ah. Si ay si sahal ah wax ugu qabtaan, haddii ay rabaan inay kordhiyaan ama xoojiyaan aqoontooda ku saabsan, dhammaadka akhrinta daabacaadan:
"Qof kastaa ma fahmo waxa uu ciyaartoygu raadinayo si uu u qalabeeyo SetUp, markaa ma dhibayso in la helo caawimo si loo helo fikradda alaabooyinka ay yihiin hadiyadaha ugu fiican. Waxaa jira qalabyo badan oo si weyn u wanaajiya khibrada ciyaarta fiidyaha, laga bilaabo sameecadaha, jiirarka ama xitaa kuraasta. Maqaalkani waxa aanu ku siin doonaa 10 fikrado ciyaartoyda in aad hubaal jeclaan doonaa. 10 Fikradaha Hadiyadaha ee Ciyaartoyda ay Jecelyihiin
1 Qolka Ciyaartoyga: Qolka jiifka ee ugu habboon ciyaartooyga
1.1 Maxaa la gudboon Qolka Ciyaartoyga ugu fiican?
1.1.1 Meesha ugu fiican
1.1.1.3 Tamarta iyo Internetka
1.1.2 Qalabka guriga ugu fiican
1.1.3 Kooxda riyada
Qolka Ciyaartoyga: Qolka jiifka ee ugu habboon ciyaartooyga
Maxaa la gudboon Qolka Ciyaartoyga ugu fiican?
Aynu noqonno ciyaartoyda cusub ama khabiirada, anagoo ku raaxaysanayna konsole ama ciyaaraha fiidyaha kombiyuutarka ee aad ugu jeceshahay, waxaan raadineynaa inaan ku sameyno a boos nala waafajiyay iyo baahidayada ciyaaraha.
Sidaa awgeed, waxaynu u janjeernaa inaan qiyaasno, rabno oo isku dayno inaan ka dhigno meel ku habboon waxa aan nahay oo jecel inaan isticmaalno oo haysanno. Taasi waa, qol adiga kuu gaar ah ama meel gaar ah, a meel ciyaarta-mawduuca ku salaysan our falsafada nolosha gamer.
Haddaba, si loo gaaro yoolkan a «qolka gamer» fiican, halkan waa qaar ka mid ah fikrado wanaagsan, talo iyo talooyin ciyaaraha in la sameeyo:
Bilowgii, ayuu yidhi «qolka gamer» fiican waa in uu leeyahay a cabbir ku habboon, dhexdhexaad ama dhexdhexaad ah, kaas oo ogolaanaya in lagu daro wax kasta oo la qorsheeyay, la helay iyo in la helo. Taasi waa, waa inay noqotaa qol dhexdhexaad ah, ma aha mid aad u weyn ama aad u yar, laakiin haa. bixi meel banaan oo diyaar ah wax kasta oo aan u maleynay in ay lagama maarmaan tahay mustaqbalka dhow, dhexe iyo muddada dheer.
Maadaama, sida cad, xaalado badan, Qof kastaa ma awoodi doono inuu xaqiijiyo qorshahan hal mar, hal garaac oo kaliya. Iyo qorshee waqti ka dib isticmaalka iyo ku raaxaysiga meesha bannaan ee bannaan, mustaqbalka fog waxay keeni doontaa in si buuxda loo fuliyo wixii la qorsheeyay.
In kasta oo ay hubaal tahay in qaar badan ay bilaabi doonaan in ay ku fuliyaan mashruuca qolkooda, haddana waxa ku habboon in ay noqoto, qol ka baxsan qolka jiifkayaga maalinlaha ah. Tani waxay ka hortagi doontaa isticmaalka laba-geesoodka ah iyo ujeedada booska. Tani waxay kaa caawin doontaa yaraynta khalkhalka iyo saamaynta muddada hurdada oo ay ugu wacan tahay buuqa, kororka korantada, ama sababo kale.
Intaa waxaa dheer, tani waxay fududeyn doontaa isticmaalka miftiin badan, labadaba dabiici iyo macmal, iyo a hawo ku filan kooxaha iyo guud ahaan goobta. Dabcan, nadiifi oo ka fogow dhammaan qoyaanka suurtogalka ah.
Tamarta iyo Internetka
Booska la sheegay waa inuu lahaadaa, ku filan oo si fiican loo qaybiyay meelaha korontada, xadhkaha fidinta iyo qalabka habaynta danab. Si loo gaaro meesha ugu fiican iyo beddelka qalabka iyo alaabta guriga wakhti kasta. Iyo xagga tamarta, ku habboon sidoo kale waxay noqon doontaa in la haysto unug wanaagsan Koronto aan kala goyn karin (UPS). Taas oo u oggolaanaysa in la ilaaliyo sida ugu macquulsan, tirada badan ee qalabka korantada iyo elektiroonigga ah, kuwaas oo hubaal ah inay yeelan doonaan qiimo sare.
Sidoo kale, waa inaad haysataa ku filan oo si fiican loo qaybiyey xog ururin, ku xiga kan ugu fiican isku xirka intarneedka iyo daboolida Xiriirka WiFi suurto gal. Sida la doorbidayo, qolka ciyaaruhu waa inuu lahaadaa isku xidh internet oo gaar ah oo aanu ahayn mid qoys oo caadi ah. Iyo in la helo, inta ugu badan ee suurtogalka ah, fiilooyinka la mariyo iyo isticmaalka isku xirka wireless-ka ee ka dhexeeya kombiyuutarka iyo qalabka ku xiran.
Qodobkani runtii waa mid shakhsi ahaaneed, maadaama ay tahay inay wax ka badan ku qabato derbiyada, sagxada, saqafka iyo muuqaalka muuqaalka oo ka mid ah qolka gamer. Halkaa marka ay marayso, qof walba waxaa laga yaabaa inuu doorbido a si gaar ah ama qaab gaar ah, kuwaas oo, tusaale ahaan, ay u taagan yihiin darbiyo cad oo iftiin ah ama midabyo pastel ah, ama midabyo adag ama madow oo derbiyo kala duwan ah. Lagu daray vinyl, sawiro ama boodhadhyo la xidhiidha ciyaaraha iyo jilayaasha aan jecelnahay ama dadka caanka ah ee adduunka gamer sida YouTubers ama Streamers-ka ugu jecel
Si kastaba ha ahaatee, ka hor inta aan la dhigin dhammaan qalabka iyo alaabta kale ee qolka gamer our, waa la samayn karaa naqshado weyn oo gidaarada, saqafka iyo sagxada. Naqshado ka dhigan mid ama in ka badan ciyaaraha ama jilayaasha aan jecelnahay, ama qaar naga badan consoles-yada la jecel yahay ama noocyada kumbuyuutarka. Ama isku darka weyn ee dhammaan waxyaalahaas aan kor ku soo xusnay, si wixii la abuuraa ay sanado ku jiraan oo aysan naga lumin ansaxnimada iyo doorbidkayaga.
"Qol cayaareedka cas wuxuu bixiyaa qaab mugdi ah, mugdi ah, qaab qarsoodi ah oo gudbinaya xoog iyo awood. Qolka ciyaarta cagaaran wuxuu bixiyaa qaabka Zen, dheellitiran, diiradda; taasoo gudbisa degenaansho, xasillooni iyo qarsoodi. Qolka ciyaarta buluuga ah wuxuu bixiyaa qaab ay ka buuxaan qoto dheer, xasillooni, xikmad, taas oo gudbisa shakhsiyadda ciyaartoyga leh maskax qabow, laakiin qalbi diiran. Iyo qolka ciyaaraha cad iyo guduudka ah ama isku-dhafka la midka ah ayaa bixiya qaab ka buuxa xarrago iyo kala soocis; taas oo gudbisa bilic qurxoon iyo muuqaal heersare ah.” cilmi-nafsiga midabka gamer
Qalabka guriga ugu fiican
Marka booska ugu fiican ee qolkayaga gamer la naqshadeeyay oo la soo saaray, waa waqtigii la sii wadi lahaa ka fakar oo hel alaabta guriga (qalabka iyo walxaha qurxinta). Alaabta guriga oo aynaan ku dari doonin qalabka ama kombuyuutarka, oo leh dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah. Oo tan, waxaan kugula talineynaa walxaha soo socda ee alaabta guriga:
Mesa: Qurxinta ama walxo kala duwan, tan waxaa laga samayn karaa caag dhalaalaya, galaas iyo crystal, ama alwaax.
Xidhmo: kartoonada ciyaarta fiidyaha, cajaladaha iyo saxanadaha, iyo jaantusyada jilayaasha waxqabadka.
Sofa: Waqtiyada nasashada iyo madadaalada ee qolo saddexaad.
Sariirta: Waqti dheer oo nasasho ah, oo aan la xiriirin saacadaha hurdada ee caadiga ah.
Dhirta: Si loo gaaro meel caafimaad qaba oo ogsajiin leh oo gudbisa dabiiciga iyo tamarta.
Sawirro, caruusadaha iyo waxyaabaha la ururiyo: Si aan u muujino dareenkeena iyo shakhsiyada gamer.
Laambadaha Neon ama LED iyo nalalka: Si loo hagaajiyo iftiinka iyo muuqaalka qolka.
fiilada TV-ga: Si aan ula socodsiino xaqiiqada nolosha, xilliyada nasashada.
Talaajad yar ama frigobar: Cunto fudud oo degdeg ah oo kala duwan, iyada oo aan lumin aragtida ciyaaraha.
Qaboojinta: Sagxadda iyo gidaarka, kuwaas oo bixiya qaboojin ku filan heerka kulaylka sare ee Gamer ama qalabka gaarka ah sida caadiga ah ay dhaliyaan.
Oo hadda, ugu dambeyntii, oo dhan qolka gamer liiska (goobta iyo alaabta guriga), waxaan ka fikiri karnaa kumbiyuutarka ama qalabka ciyaarta ku habboon, kaas oo yeelan kara walxahan soo socda:
Kursiga ciyaaraha ergonomic: Si looga fogaado dhaawac soo gaara jirka, gaar ahaan laf dhabarta iyo murqaha.
Jiirka ciyaaraha iyo kiiboodhka: Si loo helo saxnaanta weyn marka la ciyaarayo ciyaaraha iyo qurxinta miiskayaga.
Taleefannada dhegaha lagu dhegeysto ee makarafoonka leh: Si aad u maqasho oo aad ula falgasho ciyaartoy kale.
kamarad iyo muuqaal duubis: Si aan nafteena ugu muujino dadka kale baahinta tayada wanaagsan.
kombiyuutarka ciyaaraha: Iyada oo ku filan RAM, koodhadhka CPU iyo kaadhka sawirada ugu fiican (GPU) ee suurtogalka ah.
Agabka Ciyaaraha Sare: Si loo ciyaaro ciyaaraha dhabta ah, la kordhiyay iyo ciyaaraha dhabta ah ee isku dhafan.
qalabka ciyaaraha retro: Si aad u ciyaarto ciyaaraha konsole ee kombuyuutarka oo leh kontaroolayaal hore.
Retro iyo consoles-yada ciyaarta miiska casriga ah: Iyadoo qalabkooda iyo ciyaaraha ay jecel yihiin.
geeso gaar ah iyo sameecadaha: Si aad ugu raaxaysato tayada codka agagaarka heer sare ah.
Mashiinka ciyaarta fiidiyowga dabaqa hore ama miiska ciyaarta gacanta: Inaad kaligaa ku raaxaysato ama ay weheliso ciyaaro kala duwan, oo aad ka baxdo ciyaaraha casriga ah ee casriga ah.
Kuraasta ciyaaraha ergonomic-ga ugu fiican iyo noocyada ugu kalsoonida badan
Kiiboodhka gamer-ka ugu fiican ee lagu ciyaaro laguna guuleysto ciyaar kasta
Marka la soo koobo, isku day inaad gaarto "qolka cayaarta" ku haboon a xamaasad ku saabsan ciyaaraha fiidiyowga, raacitaanka qaar ama dhammaan fikradahan, talooyinka iyo talooyinka, waxay keeni doontaa shaqo lagu raaxaysto oo ku dhammaato farxad leh. Tan iyo, ugu dambeyntii, naqshadeynta iyo dhisidda a qol gaar ah ciyaaraha ayaa had iyo jeer jecel hadafka ugu dambeeya si uu nooga farxiyo. Deegaanka oo ka tarjumaya shakhsiyadeena, dhadhankayaga, hiwaayadahayada, iyo dabcan, ayaa noo ogolaanaya si fudud u ciyaar ku dhawaad ​​wax kasta oo aan rabno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Waxa ay tahay in qolkaaga jiifku noqdo qol gamer ah
Angel J Romero dijo
Qoraal heer sare ah, waa mid xiiso leh!
U jawaab Angel J. Romero
salaan Malag. Waad ku mahadsan tahay faallooyinkaaga. Aad baanu ugu faraxsanahay in nuxurku yahay sidaad jeceshahay iyo faa'iidadaada.
Jawaab José Albert